China Fudza Sack fekitori nevatengesi | Feiqing
Yedu Yekupa Saga ndeye yakagadziridzwa vhezheni yeanoshandisa mumakwikwi eMitambo. Iyo dhizaini yakateedzerwa yakadzokororwa makore mazhinji, chikafu chesaga chakagadzirwa ne1050D Cordura 100% nylon yekuvaka bhegi ine yakasungirirwa nylon inobata, yakasimbiswa katatu-yakasimbiswa seams, uye yedu fannel-yekuzadza kuvhura kuitira nyore, kunyatso kuzadza.
Sezvinoonekwa paMitambo, iyo Feed Sack yakareba, yakapusa-inobata inobata vatambi kuti vakurumidze kunhonga huremu uye kuriswededza zvakanaka pamusoro pemusoro kana kutenderedza mutsipa kuti vatakure chinzvimbo. Iwo poindi panobata machira emakona ebhegi akasimbiswa neiyo nylon webbing, uye zipi inoratidzira polyurethane backer uye kufukidza kunatsiridza kuchinjika, kuvhara kuregedza, uye kudzivirira kusangana kwakanangana nemusana wemushandisi. Mhedzisiro yacho sandbag iro zvese zviri nyore kubata uye kugadzikana kumhanya naro. Yakafananidzwawo zvakaenzana pakufamba kwekusvetuka, makwikwi, akachena uye anodhinda, uye nezvimwe.
Fudza Sack muhukuru hutatu: 50lb, 100lb, 150lb
Ndokumbira utore katsamba: Huremu huremo hwepamusoro hunoreva huremu hunofungidzirwa kana hwazadzwa nejecha rekutamba rakaoma. Kurema kukuru kuchasiyana kana uchishandisa zvimwe zvekuzadza. Vatengi vanosarudza kuwedzera odha yeyedu crumb yerabha yekuzadza kune yavo odha Uyezve, aya mabhegi haana kufemerwa.
1.1050D Cordura 100% zvinhu zvenaironi, YKK zipi.
2.looped nylon inobata, yakasimbiswa katatu-yakasona seams, fannel-filler kuvhura.
Hukuru hutatu: 50lb, 100lb, 150lb
4.custom logo ye1pc.
5.embroidery logo, kusona logo, inopisa yekudhinda logo, yekudhinda logo inowanikwa.
Pashure: Nedutu Strongman sandbag
Zvadaro: Yakabhururuka strongman sandbag
PVC slam bhora